कक्षा ११ र १२ को विद्यार्थीहरुको लागि आयो यस्तो खबर,परीक्षा कहिले ? हेर्नुहोस् - Mountain Media
कक्षा ११ र १२ को विद्यार्थीहरुको लागि आयो यस्तो खबर,परीक्षा कहिले ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा भदौ महिनासम्ममा फरक मोडालिटीमा गर्ने भएको छ । कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले बिना परीक्षा विद्यार्थीको प्रमाणीकरण गर्न समस्या हुने भएकाले केही महिना पर्खेरै भए पनि पुरानै मोडेलबाट परीक्षा लिने बोर्डको तयारी गरेको हो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आई नसकेका कारण अबको केही समय स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर परीक्षाबारे निर्णय गरिने बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा गत वर्षभन्दा फरक मोडालिटीमा गर्न बोर्डले गृहकार्य समेत थालेको बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले बताउनु भयो । असारभर पर्ख र हेरकै अवस्थामा बोर्ड रहेको भन्दै त्यसपछि मात्र परीक्षाको तयारीका बारेमा छलफल थालिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भदौसम्म परीक्षा हुने सम्भावना देखिएको र त्यो गत वर्षभन्दा फरक मोडालिटीमा हुने उहाँको भनाइ छ ।
Previous: मौसम : भारी वर्षाको सम्भावना कायमै,सतर्क रहन आग्रह
Next: ह्वात्तै बढ्यो खानेतेलको भाउ